विवाहकै भोलीपल्ट श्रीमानसहित ७ जनाले गरे बेहुलीको सामूहिक ब’ला त्का र – Sandesh Press
विवाहकै भोलीपल्ट श्रीमानसहित ७ जनाले गरे बेहुलीको सामूहिक ब’ला त्का र
June 29, 2021 317
एजेन्सी । विवाह अगाडी सीताका पतिले उनलाई अनेक सपना देखाएका थिए । तर विवहाको २ दिन पछि सीता प्रहरी चौकी जान बाध्य भइन्
उनले प्रहरीकोमा उजुरी दिदै उनले भनिन् “म माथि सामूहीक क र णी भयो ।” विवाहको २ दिन पछि उनले आफूमाथि सामूहीक क र णी र शोषण भएको बताएकी थिइन् । उनले उजुरी दिए पछि प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो । साथै विवाहाकै दिन पनि बेहुलाको परिवारले दाहिजो नल्याएको भन्दै अमानविय व्यवहार गरेका थिए ।
घटना भारतको बदायूंको हो । सीताका अनुसार उनको श्रीमानसहित ७ जनाले उनको ब ला त्का र ग रे का थिए । सामूहिक क र णी पछि उनको श्रीमानले फेरि ता तो चि म्टाले प्रा इभेट पा र्टमा डा म दिएका थिए । यो सबै कुकर्म गर्नका श्रीमानलाई उनको नन्द र जेठानीले सघाएका थिए ।
पीडितका अनुसार उनलाई पछि कोकमा विष घोलेर खानपनि दिएका थिए । तर उनले त्यो फ्याली दिएको प्रहरीलाई उजुरु दिँदा बताएकी छिन् । सीताको परिवारले पनि प्रहरीकोमा दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । बदायूं प्रहरीले सीताका श्रीमानलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान बढाएको छ ।
Prevकालो चश्मा लाएर दीपाश्री र स्वास्तिमा धान रोप्न गएपछि….
Nextपेटको बोसो घटाउन अपनाउनुस् यी ९ घरेलु विधि, पाउनुहुनेछ गज्जबको नतीजा !
केहि समय आगाडी दुई छोरीहरुसँग रमाईलो गर्दै टिकटक बनाएकी चम्सुरी अहिले छिन यस्तो अबस्थामा ,हेर्नुहोस चम्सुरिका भाइरल र एकदमै राम्रा टिकटकहरु
हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, पुग्छ यस्तो फाइदा